Boyarka: ayelapha amajikijolo
Pleasure ukubheka Hedges - Izinto engadini zobungcweti nasekuklameni ngokuziqhenya abanikazi. Lawa izingcezu nemvelo ezitaladini eyakhelwe-up. Okuhle nakakhulu ukuthi ukuphuma edolobheni ekuqaleni ehlobo futhi ujabulele ukuba nabangane egcwele oluhlaza. Lezi zinyoni Ucula, izinyosi kuyachwaza, isibhakabhaka siluhlaza futhi ecacile, izimbali ezinephunga elimnandi ... Awukwazi ukusho mayelana Hawthorn: elicwengisiswe izimbali ezincane elikhanyayo unuka njengetekisi izinhlanzi impango. Kodwa ekwindla, kokubona amagatsha ethambile ebukeka, oluneziqhingi ezincane amajikijolo purple, futhi ufuna ukuba ngokuthi kule ocebile kazwelonke Boyarsky ehlathini - hawthorn. ayelapha isithelo sawo eyaziwa isikhathi eside, futhi ngokoqobo lesi sitshalo liyatholakala, ngokuba hawthorn - isitshalo kakhulu Hedges: ngokusebenzisa kwakhe olukhuni iva proberetsya hhayi elilodwa!
berry Hawthorn. Yeka ubuhle?
Hawthorn eyilungu lomkhaya pink. Sikwazi ukukhula lesi sihlahla kuze kube amamitha amane ukuphakama, kuphenduke isihlahla kucocekile. Lolu khuni okuhlala isikhathi eside kakhulu futhi enamandla, futhi chetyrehsantimetrovye ameva unganikeli isihe kumuntu. amacembe ezincane bahlangana inflorescences ezinophahla olungunxantathu. Izimbali akaphinde asibalele, futhi engxenyeni yesonto, kodwa ngalesi sikhathi bee-toiler ube isikhathi sokubutha umpe. uju Hawthorn - eziwusizo kakhulu. Ekwindla ka amagatsha isihlahla wathela izithelo, cishe kunganambitheki nabancane, kodwa lokho kuyasiza!
Boyarka: ayelapha inikeza Ukwakheka kwamakhemikhali
Hawthorn unothile ngempela, ecebile ngezithako zawo. Ngo kancane esingaphansi sentimutha ububanzi berry iqukethe umsoco abaningi! Lokhu choline, acetylcholine, flavonoid, amafutha abalulekile, caffeic acid, ngisho iwayini kanye citric acid, amafutha okunamafutha, saponins, tannins, sorbitol ... Futhi lokhu akuyona uhlu oluphelele.
Boyarka: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications ukusetshenziswa
La majikijolo kuyasiza kakhulu. Okokuqala, sinake izakhiwo hawthorn ukuthi sithuthukise ukusebenza inhliziyo. Amalungiselelo esekelwe hawthorn usimamise-high blood pressure, inhliziyo ithoni. Lapho ethola kwegazi igazi kuthuthukisa, ngeke uhlupho ukuqwasha, iphika tachycardia. Futhi ngokuvamile, kungcono uphuze zezinkambi amakhambi nama infusions nokuvimbela isifo senhliziyo - abantu yokuguga is umsizi engcono. Ngaphezu jikelele eqabulayo umphumela, berry kuyinto amavithamini futhu ehloniphekayo. Ngokwesibonelo, vitamin C amajikijolo kakhulu, ngakho-ke kuhle ukuncika e Boyarka umkhuhlane isizini futhi imikhuhlane.
Futhi isigqi bebangalasa of edolobheni azosiza ukuzola futhi balahle ukukhathala ungcono hawthorn? ayelapha akugcini lapho - futhi odokotela bamazinyo baye baqaphela umphumela sakhe esihle. Kunengqondo ukuphetha ngokuthi wonke kuyinto berry omuhle, kodwa lapha kuphela kukhona Izimo. It is hhayi Kunconywa ukuba udle kakhulu izithelo izinkomishi ngosuku, ikakhulu kubantu besifazane abakhulelwe nabancelisayo, futhi abantu izinso izinkinga - umthwalo kakhulu esiswini. Futhi kufanele sikhumbule futhi ukuthi amajikijolo kungadala ukozela kanye nesimo ekhululekile, ngakho abashayeli kumele uqaphele ekusebenziseni kwabo.
Yini ukupheka kusukela hawthorn?
I amajikijolo ungenza ujamu ujamu, ujamu, ozokusiza ebusika engakutholi ogulayo; bona kunezelwa apula compote, bagcizelele futhi wenze itiye, zezinkambi engamakhambi, isithako nomuthi. Uma ugaye amajikijolo, enezele ufulawa - uzothola inhlama amnandi. Izimbali futhi iqoqe futhi wenze tincture, okuyinto ishaya yimuphi izidakamizwa.
I-beet juice kusukela umkhuhlane: Izibuyekezo
Ipayipi umDashi sika: ayelapha, incazelo. Ukusebenzisa kirkazona e zabesifazane
Cavitation indlela - kuyini? Iyini inqubo futhi yiziphi contraindications cavitation?
Fitobochka - kuyini? Cedar emgqonyeni. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe inqubo, Izimo
Yakorets ezinwabuzelayo: isicelo futhi libuyekeza akhiphe Tribulus
"Konke kwemali, izinguquko konke" - owathi le nkulumo?
Okufanele ukwenze lapho umubi
Lithium polymer ibhethri: ngokungafani ion, ukuqina, kudivayisi. Li-pol noma Li-ion: yimuphi ongcono
Ishidi Steklomagnezitovy: izicelo, ngebuhle nebubi
Indlela Yokufuduka eya eCanada
Yini nendlela alole yokusaha?
Isigqoko "Altyn": izithombe, izici
Bukela "Casio Protrek": ukubuyekezwa, manual, ukubuyekeza
AmaShayina Communist Party: base usuku, abaholi, imigomo